इकोस्फेयर: यो के हो, विशेषताहरू, प्रयोगहरू र बढि | नेटवर्क मौसम विज्ञान
जर्मन पोर्टिलो | 23/04/2021 09:20 | Ciencia
हाम्रो ग्रह एक प्राकृतिक प्रणाली हो कि जीवित जीवहरू र एक भौतिक वातावरण जहाँ तिनीहरू अन्तर्क्रिया गर्दछन् र बसिरहेका छन्। को अवधारणा पारिस्थितिक क्षेत्र यसले चीजहरूको सम्पूर्ण सेटलाई समाहित गर्दछ जस्तो यो ईकोसिस्टम भित्रको पूर्ण हो। हामीलाई थाहा छ कि इकोसिस्टम जीवहरूको घर जस्तो छ जुन प्रकृतिको बीचमा रहन्छ र यसले सबै आवश्यक संसाधनहरू प्रदान गर्दछ ताकि तिनीहरू बाँच्न, खुवाउन र पुन: उत्पादन गर्न सक्दछन्।
यस लेखमा हामी तपाईलाई ईकोस्थिर र यसको विशेषताहरु को बारे मा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउन जाँदैछौं।
1 पारिस्थितिक क्षेत्र के हो?
2 इकोसिस्टम र बायोमहरू
3 बच्चाहरूको लागि इकोसियरको व्याख्या
4 ईकोस्फीयर र प्रयोगहरू
पारिस्थितिक क्षेत्र के हो?
पारिस्थितिक क्षेत्रको अवधारणा समग्र हो, त्यसैले यसले सम्पूर्ण चीजहरूको सेट समावेश गर्दछ। यो एक टर्म हो जुन इकोसिस्टमलाई त्यस्तो तरीकाले दर्साउँछ जुन सामान्यतया ग्रहको दृष्टिकोणबाट हेर्दछ। उदाहरण को लागी, एक ईकोसिस्टम वातावरण, जियोस्फियर, हाइड्रोसियर, र जैव क्षेत्र बाट बनेको छ। हामी प्रत्येक अंशहरू भंग गर्न लाग्दछौं र यसका विशेषताहरू के छन्:
भूगोल: यो त्यो क्षेत्र हो जुन सम्पूर्ण अजैलोजिकल अंश समेट्छ, जस्तै चट्टानहरू र माटो। इकोसिस्टमको यो सबै अंशको आफ्नै जीवन हुँदैन र जीवित जीवहरूले यसलाई जीविका चलाउन प्रयोग गर्दछन्।
जलविद्युत: यसले इकोसिस्टममा सबै अवस्थित पानी समेट्छ। त्यहाँ हालको पानीका धेरै प्रकारका छन् जुन ताजा वा नुनिलो पानी हो। हाइड्रोस्फेयरमा हामी नदीहरू, तालहरू, खोलाहरू, खोलाहरू, समुद्र र समुद्रहरू फेला पार्छौं। यदि हामी वनको ईकोसिस्टमको उदाहरण लिन्छौं भने हामी हाइड्रोस्फेयर नदीको त्यो अंश हो जुन ज that्गल पार गर्दछ।
वातावरण: विश्वका सबै ईकोसिस्टमहरूको आफ्नै वातावरण छ। त्यो हो, यो वरपरको वायु हो जहाँ जीवहरूको क्रियाकलापबाट उत्पादित ग्यासहरू आदानप्रदान हुन्छन्। बोटबिरुवाहरूले प्रकाश संश्लेषण गर्छन् र कार्बन डाइअक्साइड शोषण गरेर अक्सिजन उत्सर्जन गर्छन्। यो ग्यास विनिमय वातावरणमा हुन्छ।
जैव क्षेत्र: यो भन्न सकिन्छ कि यो एक अन्तरिक्ष हो जीवित जीवहरूको अस्तित्व द्वारा सीमित। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, वनको ईकोसिस्टमको उदाहरणलाई फर्केर हेर्दा हामी भन्न सक्छौं कि जैव क्षेत्र ईकोसिस्टमको क्षेत्र हो जहाँ जीवित जीवहरू बस्छन्। यो भूमिगतबाट आकाशमा पुग्न सक्छ जहाँ चराहरू उडान गर्छन्।
इकोसिस्टम र बायोमहरू
पारिस्थितिक क्षेत्रलाई समेट्ने ठूलो इकोसिस्टमलाई धेरै साना इकोसिस्टमहरूमा विभाजन गर्न सकिन्छ जुन अध्ययन गर्न सजिलो छ र आफ्नै विशेषताहरूको श्रृंखला फेला पार्न सकिन्छ जसले तिनीहरूलाई अनौंठो बनाउँछ। यद्यपि तिनीहरू सबै उच्च एकाइहरूको बायोम भनिन्छन्, इकोसिस्टमलाई कुल एकाईमा विभाजन गर्न सकिन्छ। त्यो हो, इकोसिस्टममा आफैंले जीवन होस्ट गर्न सक्षम हुनुपर्ने सबै आवश्यकताहरू छन् र ती जीवित जीवहरू र वातावरण बीचको अन्तरक्रिया छन्। एक biome छ ठूला इकोसिस्टमहरूको सेट जुन समान विशेषताहरूलाई एकताबद्ध गर्दछ र त्यो दुबै जलीय र स्थलीय हुन सक्छ।
केहि बायोमहरूको उदाहरण लिनुहोस्: उदाहरणका लागि हामी दलदल, ईस्टुअरीज, जles्गल्स, पानाहरू, उच्च समुद्री क्षेत्रहरू, इत्यादि फेला पार्न सक्छौं। यदि हामी इकोसिस्टमहरू बारे कुरा गर्छौं भने हामी एक पक्ष, ज forest्गल आदि बारे कुरा गर्न सक्छौं। यद्यपि बायोमहरू यी इकोसिस्टमको सेट हो जहाँ समान प्रजातिहरू बस्न सक्छन्।
अब हो जब हामीले समीकरण मा मानव को परिचय दिनु पर्छएन मानव जातिले विभाजन र पारिवारिक वर्गीकरण तिनीहरूलाई अझ राम्रो बुझ्नको लागि। तपाईं शोषण र इच्छा मा तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा प्रस्ट छ, प्रकृति पूर्ण छ र जीवित जीवहरू र वातावरणको बीचमा अपरिहार्य, स्थिर र जटिल अन्तर्क्रिया छ।
बच्चाहरूको लागि इकोसियरको व्याख्या
एक सरल तरिकामा, हामी पर्यावरणको व्याख्या गर्न गइरहेका छौं। यो मान्न सकिन्छ कि यो एक वैश्विक ईकोसिस्टम हो जसमा सबै जीवित प्राणीहरू एक अर्कासँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन्। हामी प्रकाश संश्लेषक जीवहरूको उदाहरण लिनुहोस्। यी जीवहरू वातावरणमा अक्सिजन मुक्त गर्नका लागि जिम्मेवार छन् र यसले अन्य जीवजीवातहरूलाई आफैंलाई खुवाउँछ। जलविज्ञान चक्र पनि इकोस्फीयरको एक अंश हो जुन यस ग्रहमा सान्दर्भिक छ। सबै जीवित प्राणीहरूले पानीको उपयोग गर्छन् किनकि हामीलाई बाँच्नको लागि यो आवश्यक छ।
समुद्र र भूमिमा पानी सार्ने प्रक्रिया जीवनको लागि मौलिक घटना हो र एक ग्रह स्तरमा यो हुन्छ। यो जलविज्ञान चक्र हो। ग्रहको देखभाल गर्न हामीले ईकोस्फीयरको ख्याल गर्नुपर्छ र आफैंको देखभाल गर्नुपर्छ।
ईकोस्फीयर र प्रयोगहरू
यो एक प्रकारको लघु ग्रह हुन सक्छ भन्ने ईकोसिस्टम बनाउन को लागी नासा द्वारा गरिएको एक प्रसिद्ध प्रयोग को पारिस्थितिक क्षेत्र को रूप मा पनि जानिन्छ। सानो आकारमा एउटा ग्रह पृथ्वी अनुकरण गर्न जीवित र निर्जीव जीवहरू बीचको सबै अन्तरसम्बन्धहरूको नक्कल गर्ने प्रयास गरियो।
भित्र एक क्रिस्टल अण्डा प्रस्तुत गरिएको थियो एक समुद्री जल सब्सट्रेट, झींगा, शैवाल, गोर्गोनियन, बजरी र ब्याक्टेरियाको साथ। जैविक गतिविधि पूर्ण पृथक तरिकाले गरिन्छ किनभने कन्टेनर हर्मेटिकली बन्द छ। यसले बाहिरीबाट प्राप्त गरेको एक मात्र कुरा बाह्य प्रकाश हो जुन जैविक चक्रलाई कायम राख्न र हाम्रो ग्रहमा सूर्यको उपस्थिति लुकाउन सक्षम हुनेछ।
यस पारिस्थितिकीय प्रयोगलाई एक उत्तम संसारको रूपमा हेरियो जहाँ वातावरणको आत्मनिर्भरताको लागि झिंगा धेरै वर्षसम्म बाँच्न सक्दछ। थप रूपमा, त्यहाँ वातावरणीय दूषितताको कुनै प्रकार छैन त्यसैले यसलाई कुनै पनि प्रकारको सफाईको आवश्यकता पर्दैन र यसको मर्मत न्यूनतम हुन्छ। यो बुझ्नको लागि यो एउटा रमाईलो प्रयोगको अनुभव हो, जबसम्म यो पारिस्थितिक सन्तुलनलाई सम्मान गरिएको छ, सबै कुरा मिलापमा बस्न सक्छन्।
वातावरणीय सन्तुलन फेरि प्राप्त गर्न र फेरि कायम राख्न केहि निश्चित शर्तहरू पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कुरा बुझ्न र सचेत हुन हामी के हुँदैछ भनेर केही तुलनाहरू सेट गर्न सक्छौं। वर्तमान टेक्नोलोजीको साथ हामी प्रदूषण गर्ने ऊर्जाको ठूलो मात्रामा उत्पादन गर्न सक्छौं जुन पर्यावरणीय सन्तुलन एक ग्रह स्तरमा हराउन को कारण छ। हामी असंख्य प्रजातिहरूको इकोसिस्टम र आवासहरू पनि नष्ट गर्दैछौं, असंख्य अवसरहरूमा विलुप्त हुनको लागि।
यद्यपि हाम्रो ग्रहको इकोस्फीयर प्रयोग भन्दा धेरै जटिल छ, जीवन चक्र पनि यस्तै प्रकारले विकसित हुन्छ। त्यहाँ केहि मौलिक तत्वहरू छन् जुन हस्तक्षेप गर्दछ ती हावा, पृथ्वी, प्रकाश, पानी र जीवन हुन् र सबै कुरा एक अर्कासँग सम्बन्धित छ। कसै-कसैले इकोस्फीयर एक गतिशीलबाट सिर्जना गरिएको हो कि दुबै हार्मोनिक र अराजक परिस्थितिमा नेतृत्व गर्छ भनेर दाबी गर्छन्।
म आशा गर्दछु कि यस जानकारीको साथ तपाईले ईकोस्फीयर र यसको विशेषताहरु बारे बढी जान्न सक्छौ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Ciencia » पारिस्थितिक क्षेत्र